भर्खरै पत्ता लाग्यो मेलाम्चीमा पहिरो जानुको खास कारण ! यस्तो पो रहेछ खास कारण थाहा पाएर सबै भए चकित – Media News Khabar
भर्खरै पत्ता लाग्यो मेलाम्चीमा पहिरो जानुको खास कारण ! यस्तो पो रहेछ खास कारण थाहा पाएर सबै भए चकित
medianewskhabar //काठमाडौं । मेलम्ची आयोजनाको सुरुङभित्र प्राविधिक पठाएर सुपरीवेक्षण गर्नका लागि लागि मंगलबार विहान ११ बजे सुरुङको गेट बन्द गरियो । अम्बाथानबाठ खोलाको पानी खोलातर्फ नै सोझ्याइयो । तर, त्यसको ७ घण्टा नबित्दै मेलम्ची खोलाको मुहान भेगमा ठूलो पहिरो गयो र केही बेर खोला थुनिन पुग्यो ।
खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव बेल्वासेले पनि यदि मेलम्चीको सुरुङले बाढीको समाना गर्नुपरेको भए धेरै जटिलता थपिने समाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन् । उनले लेखेका छन्,’मेलम्ची सुरूङ परीक्षण सम्पन्न गर्ने क्रममा बाढीको प्रकोपभन्दा एक दिन अगाडि बन्द गर्ने निधो गरिनुमा भगवान पशुपतिनाथको कृपा जस्तो लाग्छ, अहिले सुरूङ सञ्चालनमा हुदों हो त धेरै जटिलता थपिने थिए ।’
Previous देश गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियता खारेजीको चरणमा जाँदै छः महेश बस्नेत
Next सबै नेता हरु चुप भएको बेला पूर्वराजा शाहले दिए यस्तो सन्देश,चौतर्फी वाहवाह